XOG: Xildhibaanada BF oo Maanta laga Cabsi qabo in ay Gacanta iskula tagaan & Wararkii Ugu dambeeyay oo sheegaya…. | Badweyn.com
XOG: Xildhibaanada BF oo Maanta laga Cabsi qabo in ay Gacanta iskula tagaan & Wararkii Ugu dambeeyay oo sheegaya….
Xildhibaannadda Golaha Shacabka ayaa maanta mar kale kulan ka yeelanaya arrinta sarkaalka ONLF ee dowladda Soomaaliya ay u dhiibtay Itoobiya.
Guddiga joogtada ah ee Golaha Shacabka Soomaaliyeed ayaa go’aamiyay in maanta la qabto fadhigii Baarlamaanka ee baaqday Sabtidii, ayaa xildhibaannada ugu baaqay inay ka qeyb galaan shirka maanta.
R/wasaare Xasan Cali Kheyre iyo xildhibaanada taageersan ayaa ku kalsoon inay heystaan taageero ku filan oo kiiskan looga horjeedo ay ku laali karaan, kadib muddo toddobaad ku dhow oo ay olole ka dhex wadeen xildhibaannada.